Kenya oo xirtay xuduuda Degmooyinka Mandheera iyo Beled Xaawo, markii ay ciidan lixaad leh soo dhoobtay | Baydhabo Online
Kenya oo xirtay xuduuda Degmooyinka Mandheera iyo Beled Xaawo, markii ay ciidan lixaad leh soo dhoobtay
Kenya, ayaa waxay gelinkii dambe ee Isniintii joojisay dhaq dhaqaaqii dadka iyo gaadiidkaba ee ka jiray xuduuda ay wadaagan Degmooyinka Beled Xaawo iyo Mandheera, oo ka kala tirsan Gobolada Gedo iyo Waqooyi Bari Kenya.
Dadka labada dhinac oo si caadi ah isugu kala gooshi jiray Degmooyinkaasi, ayaa waxaa la arkaayay iyagoo laga horjoogsanayo in ay isugu kala gooshaan Beled Xaawo iyo Mandheera, waxaana lagu wargeliyay in xuduudu ay xiran tahay.
Tani waxay timid, ka dib markii Dowladda Kenya ay ciidan lixaad leh soo dhoobtay xuduuda, kuwaa oo la soo sheegayo in ay wataan dabaabaadka dagaalka, cagaf cagafyo iyo baldoosarada dhismooyinka loo adeegsado.
Shacabka ku dhaqan Degmada Beled Xaawo, ayaa walaac ka muujiyay dhaq dhaqaaqa cusub ee Kenya ku soo kordhisay xuduuda, waxayna kuu sheegayan in dareen ay ka qabaaninay Kenya soo cusbooneysiisay qorshihii ay ku dooneysay in darbiga kaga dhisto xuduuda.
Maamulka Gobolka Waqooyi Bari Kenya oo toddobaadkii hore u yeeray Gudoomiyaha Degmada Beled Xaawo, Yuusuf Maxamed C/qaadir (Yuusuf Keenti), ayaa ka dalbaday in uu kala shaqeeyo arrinta darbiga.
Ilo wareedyo lagu kalsoonaan karo, ayaa sheegay in Yuusuf Keenti uu Maamulka Waqooyi Bari ku gacanseyray qorshahaasi, una sheegay in go’aankaasi ay leedahay Soomaali oo dhami.
Waxaad mooddaa Kenya inay geed gaaban iyo dheerba u fuuleyso, sidii ay darbiga kaga hirgelin laheyd xuduuda, xilli ay gudaha ugu soo durugtay dhulka Somaliya.